Jasiiradaha Solomon Islands: 82,000 oo laga yaabo inay saameeyeen dhulgariirkii ugu dambeeyay ee 6.2
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Jebinta Wararka Safarka » Jasiiradaha Solomon Islands: 82,000 oo laga yaabo inay saameeyeen dhulgariirkii ugu dambeeyay ee 6.2
Dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ayaa la toosiyey subaxnimadii Isniinta 6.37 subaxnimo ka dib dhulgariir 6.2 ah oo ku dhuftay jasiiradaha Solomon. Waxay saameyn ku yeelan kartaa dad gaaraya 82000 oo qof 100km gudahood.
Dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ayaa la toosiyey subaxnimadii Isniinta 6.37 subaxnimo ka dib dhulgariir 6.2 ah Sulaymaan Islands garaac. Waxay saameyn ku yeelan kartaa dad gaaraya 82000 oo qof 100km gudahood.
Dhulgariirkii xoogga badnaa wuxuu ku dhuftay qoto dheer qiyaastii 83km (52miles), 66km NW of Kirakira, Solomon Islands.
Marka loo eego nidaamka digniinta Sunaami ee Mareykanka, ma jiraan Digniin Tsunami, La-talin, Ilaalin, ama Hanjabaad ka dib dhulgariirkii ay ku cabireen M6.7.
Goobtu sida ay sheegtay USGS
66.1 km (41.0 mi) NW ee Kirakira, Islands Islands
181.3 km (112.4 mi) ESE ee Honiara, Islands Islands
776.5 km (481.4 mi) ESE ee Arawa, Papua New Guinea
864.4 km (535.9 mi) NW ee Luganville, Vanuatu
1126.8 km (698.6 mi) NW ee Port-Vila, Vanuatu
Waqtigaan lama garanayo waxyeello ama dhaawacyo.
Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah ee Tareenka ee NY waxay xasuusin u tahay Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha
Dalxiiska Nepal wuxuu ka ifayaa 5th Sichuan International Travel Expo (SCITE)